Tim Cook chetara Steve Jobs n'akwụkwọ ozi o degaara ndị ọrụ | Esi m mac
Couplebọchị ole na ole gara aga ọ bụ afọ ise kemgbe ọnwụ Steve Jobs, onye guzobere ụlọ ọrụ kachasị baa uru n'ụwa taa. A na-ahụta Steve Jobs dị ka otu n'ime ndị ọhụụ kachasị mkpa na afọ ndị na-adịbeghị anya, ruo mgbe kansa kwụsịrị ndụ ya na 2011. Obere oge tupu ọnwụ ya, ọ bụ Jobs n'onwe ya kwupụtara ọkwa ya maka ịhọrọ Tim Cook dị ka onyeisi ụlọ ọrụ ozugbo ọ na-apụ. Tim Cook nwere ekele maka ntuli aka nke obi ike ahụ kwa afọ n'oge a iji cheta ncheta ncheta nke ọnwụ nke ọgụgụ isi na ọgụgụ nke Apple.
Amaara m na ọtụtụ n'ime unu na-eche maka Steve taa, afọ ise mgbe ọ gafesịrị. Ọnụnọ ya ka dị ebe a na Apple, a na-enwe mmetụta miri emi gburugburu ụwa.
Onwe m, m na-eche maka Steve kwa ụbọchị. Ncheta ya bụ ihe na-agba ume na isi iyi nke ike maka m, ma na ọrụ m ma na ndụ m. Echere m banyere ihe ize ndụ ị weere dị ka onye na-agbanwe ihe na onye ndu, echekwara m banyere mkparịta ụka anyị nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla banyere ụlọ ọrụ anyị, ndị ahịa anyị, ezinụlọ anyị, na ndị enyi anyị. Ha bụ ncheta ndị a na-echeta mgbe niile.
Karịa mgbe ọ bụla, ngwaahịa na echiche ndị Steve webatara na-emetụta oge anyị taa. Ọ dị m ka ya bụrụ na m ga-ahụ ka eserese siri ike ma sie ike na iPhone abụrụla. Ama m na ị ga-enwe mmasị na anwansi na obi ụtọ nke atụmatụ iOS 10 Photo Memories.
Apple, ụlọ ọrụ o wuru ma mesịa napụta, bụ n'ọtụtụ ụzọ Steve na-adịgide adịgide nketa. O kwenyesiri ike na Apple kwesịrị ịkpali anyị ime ọrụ kachasị mma nke ndụ anyị, na-eke ngwaahịa ndị na-eme ka ndụ ndị ọzọ baa ọgaranya.
Steve mere ka ụkpụrụ Apple doo anya. Ọ kuziri anyị ka anyị lekwasi anya n'ime ihe ole na ole na-eme nke ọma, na ịtọlite ​​ihe dịịrị onwe anyị. Ọ gwara ka anyị na-agbasi mbọ ike maka ịdị mfe, na ngwaahịa anyị na ụzọ anyị. Amakwaara m na site na ịmekọrịta Apple, anyị nwere ike mezuo ihe ọ bụla ụlọ ọrụ ọzọ nwere ike ime. Anyị ji Apple ihe ịga nke ọma n'ime afọ iri abụọ gara aga na ụkpụrụ ndị bụ isi.
Steve kuzikwara m na oke ọ joyụ na ndụ dị na njem ahụ, ọ bụghị n'oge ọbụla ma ọ bụ mmemme ọ bụla. Ọ bụghị banyere mbupu ma ọ bụ ire ahịa, ma ọ bụ imeri ihe nrite. Ezigbo ọ joyụ dị na iru ebe ahụ.
Steve bụ onye pụrụ iche, nke anyị na-agaghị echefu echefu. Daalụ maka ịhapụ m ka m bụrụ akụkụ nke ihe nketa gị, yana maka isonyere m na njem a n'ọdịnihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Tim Cook chetara Steve Jobs n'akwụkwọ ozi o degaara ndị ọrụ